Mba hanena ny tahan’ireo basy tsy ara-dalana miparitaka manerana ny nosy, nisy hetsika manokana nokarakarain’ny fitondram-panjakana hameranana izany tamin’ny alalan’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena sy ny ministeran’ny filaminam-bahoaka ary ny sekretariam-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena. Nanomboka ny volana may lasa teo ka hatramin’ny faha 20 jona hoavy izao no fe-potoana farany hahafahana mamerina izany raha araka ny tapaka.
Eny amin’ny biraon’ny polisy na ny paositry ny zandarimariam-pirenena ny toerana hahafahana mamerina izay ary tsy misy ny arakaraka. Hatreto, efa nisy ny namerina izay toy ny tao amin’ny distrikan’Isandra faritra Matsiatra Ambony faritanin’i Fianarantsoa ny 12 jona lasa teo. Basy niisa folo no naterin’ireo dahalo tamin’izany. Antony namerenan’ireto dahalo ireto ireo basy ireo ny tahotra ireo mpitandro ny filaminana 400 lahy izay mampandry tany amin’iny Faritr’i Fianarantsoa iny na ilay antsoina hoe Zone Rural Prioritaire de Sécurité ALPHA.
Mbola manentana ny rehetra hatrany ny avy eo anivon’ny mpitandron’ny filaminana mba hamerina ireo basy tsy ara-dalana mialoha’ny 20 jona hoavy izao. Raha vao taran’izay, hiaran’ny sazy avy hatrany ireo mbola minia mitazona izany.